१९ वर्षको उमेरमा बलात्कृत - Kantipath.com
पप सेन्सेसन लेडी गागले आफ्नो जीवनको तीतो वास्तविकता सार्वजनिक गरेकी छिन् । ओप्रा विन्फ्रेको शोमा लेडी गागाले आफूमाथि भएको यौन शोषणबारे कुरा गरेकी छिन् । लेडी गागाले आफू १९ वर्षको उमेरमा बलात्कृत भएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार उनलाई एक सङ्गीतकर्मीले बलात्कार गरेका थिए जसका कारण उनी गर्भवती भएकी थिइन् ।
लेडी गागाले त्यतिबेलाको घटना स्मरण गर्दै भनिन्, ‘म १९ वर्षको हुँदा बलात्कारमा परेँ । त्यतिबेला एक निर्माताले मलाई कपडा उतार्न भने । मैले यसका लागि अस्वीकार गरेँ र त्यहाँबाट गएँ । त्यसपछि उनले मलाई धम्की दिएर मेरो सबै सङ्गीत बर्बाद गरिदिने बताए र उनी रोकिएनन् ।’
गायिकाका अनुसार बलात्कारको वर्षौंपछि पनि उनलाई शरीर दुख्ने समस्या देखिएको थियो जसको उपचारका लागि उनी अस्पतालमा नै धाउनुपर्यो । उनी भन्छिन्, ‘सुरुमा त मेरो शरीर बेस्सरी दुख्यो त्यसपछि मलाई केही महसुस भएन । त्यसको केही दिनपछि ज्वरोले थला पार्यो । हप्तौं बित्यो ।’
‘पछि मैले महसुस गरेँ कि म बलात्कृत हुँदा पनि यस्तै पीडा भएको थियो । मलाई मेरो आमा–बुवाको घरको एउटा कुनामा छोडियो किनभने मलाई त्यतिबेला उल्टी भइरहेको थियो र म असाध्यै बिरामी थिएँ । मेरो शोषण भएको थियो । थुप्रै महिनासम्म मलाई स्टुडियोमा लक गरेर राखिएको थियो ।’
लेडी गागाले अब ती व्यक्तिलाई कहिले पनि देख्न नपरेपनि हुन्थ्यो भन्ने इच्छा व्यक्त गरेकी छिन् । उनले बलात्कारपछि आफू कुनै पनि हालतमा पहिले जस्तो नभएको बताएकी छिन् । बलात्कारपछि जुन तनाव र ट्रमाबाट उनी गुज्रिइन् त्यसले उनलाई भित्रैदेखि विचलित बनाएको उनले बताइन् ।
लेडी गागाले भनिन्, ‘थुप्रै वर्षसम्म म साइकोटिक ब्रेकमा रहेँ । म त्यस्तो खालको केटी थिइनँ । त्यतिबेला मैले थुप्रै एमआरआई र स्क्यान गराएको थिएँ तर त्यसले केही राम्रो गरेको जस्तो लागेन । तर तपाईंको शरीरलाई सबै याद रहन्छ । मलाई केही पनि महसुस हुँदैनथ्यो । यस्तो थियो कि तपाईंको दिमाग अफलाइन भएको छ ।’
त्यसपछि लेडी गागाले बिस्तारै आफ्नो पीडा बिर्सिएर जीवनमा अघि बढिन् । उनले थेरेपी लिइन् । साढे दुई वर्षको थेरेपीपछि उनी नर्मल हुन सकिन् ।
पर्सनल फ्रन्टको कुरा गर्ने हो भने लेडी गागा व्यवसायी माइकल पोलान्कीलाई डेट गरिरहेकी छिन् । लेडी गागा फेशनिस्टा हुन् र उनी आफ्नो ड्रेसिङ सेन्स र यूनिक स्टाइलका कारण चर्चामा छाइरहन्छिन् ।
कामको कुरा गर्ने हो भने लेडी गागाको आउँदो प्रोजेक्ट क्राइम ड्रामा हाउस अफ गुची हो । लेडी गागाको सोसल मिडियामा तगडा फ्यान फलोविङ छ ।
Previous Previous post: म कानुन हेरेर फैसला गर्छु : राष्ट्रपति
Next Next post: ३९ सांसदको दुवै तर्फ हस्ताक्षर : को बन्ला प्रधानमन्त्री ?
कछुवा बेच्न लाग्दा ३ जना कर्याप्यै
५ हजार रुपैयाँ दिएर यौन धन्दामा लगाइएका १० जनाको उद्धार
‘नाक छैन, कान छैन ! झुम्का कहाँ लगाउनु ?’ यस्तो बन्यो ‘छपाक’को ट्रेलर (भिडियो)
सलमान,अक्षय भन्दा विराट धनी,कसले कति कमाए ?
१३ वर्षको उमेरमा घरभित्र बलात्कारको कोसिस भएको गोबिन्दाकी भाञ्जीको खुलासा
कट्रिना र विक्की रिलेसनशिपमा !
टुंगियो ‘साङलो’ गीत चोरीको विवाद, यी कुरामा भए समहती
हिमांसलाई नेहाको जवाफ: ‘मैले मुख खोलेँ भने तिम्रो परिवारको कर्तुत सार्वजनिक गर्नेछु ’